Option ကိုဂျာမဏီ | ပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးဖို့
THE NEXT ကိုလူမှုဆက်သွယ်ရေးရွေးချယ်!
Option ကိုအကြောင်း | မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ထောက်ခံမှု option ကို
အနည်းငယ်မျှသာ - ထိနျးခြုပျနှားခြေးမွငျးခြေး
System ကို Sprenger - တိုတောင်းတဲ့-စိတ်တိုမိန်းကလေး
ပင်လယ်မှာအမြိုးသမီးတနျခိုးတျော | အဆိုပါ 1 ။ RainbowWarrior III ၏အရာရှိချုပ်
ခေါင်းလျှော်ရည်ပုလင်းထဲကနေ Bastelanleitung Stiftebox
ဘယ်လို Greenpeace သဘာသနည်း
Caroline Kebekus: လိင်အရအခွင့်အရေး Advertising ကြော်ငြာ | Pussyterror တီဗီ
သင့်ရဲ့လမ်းကိုဘယ်လိုညစ်ပတ်တာလဲ | Greenpeace သဘာထံမှနိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်ကဒ်
Garzweiler (1985 မှ 2016)
စိတ်ကျရောဂါ - ကုထုံးတစ်ခုလား၊
ကမ္ဘာ့ဖလားတိရိစ္ဆာန်နေ့ 2019: တိရစ္ဆာန်အခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ Tierrechtsverletzer များမှာ
in ဂျာမဏီ, ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်စားသုံးမှု
in အခြားရွေးချယ်စရာနှင့်ထင်မြင်ချက်များ, ဂျာမဏီ
in ဂျာမဏီ, အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် NGO အဖွဲ့
in အဲန်ဂျီအိုများ၏သတင်းများ, ဗီဒီယိုများ
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်လူ, တိရိစ္ဆာန်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကို | အကျင့်ကိုကျင့်! Greenpeace သဘာ Podcast တခုကို #4
တစ်တန်တစ်လမ်းကြောင်းသစ် - ထောပတ်သီး
in ဂျာမဏီ, ခရီးသွားသိကောင်းစရာများ
ဆောင်း ဦး ရာသီ၌ Dolomites
၏ နီနာဗွန် Kalckreuth
လေယာဉ်ခရီးစဉ်များလျှော့ချလိုသော်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အားလပ်ရက်တွင်လက်လွတ်မခံလိုသူများသည်အခြားနည်းလမ်းများကိုစဉ်းစားနိုင်သည်။ ဥရောပတွင်သင်ခံစားရနိုင်သောရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ [... ] ပိုပြီး
Prostimme Contra စကားသံကို
in ဂျာမဏီ, ချက်ပြုတ်နည်းများ
မင်းအစားအသောက်တွေထုတ်ပစ်နေသလား လူအများစုက "မဟုတ်ဘူး!" ဟုဖြေလိမ့်မည်။ သို့သော်ကိန်းဂဏန်းများအရအခြားအစားအစာနှင့်စိုက်ပျိုးရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏အဆိုအရလူတိုင်းပစ်ချ [... ] ပိုပြီး
CO2 မှ 2050 အထိပစ်မှတ်များသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဂေဟစနစ်အတိုင်းအတာကိုတိတိကျကျသိရန်မည်သို့ဆိုမည်နည်း။ ရလဒ်များသင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်နည်း ယခုနှစ် [... ] ပိုပြီး
အစားအစာသိမ်းဆည်းခြင်း - သင့်အတွက်အသုံးဝင်သောအက်ပ်များ
စားသောက်ဆိုင်မှကျန်ရှိသောအစားအစာများမည်သည့်နေရာမှရောက်လာသည်ကိုသင်စဉ်းစားဖူးပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်စူပါမားကတ်ကနေအစားအစာလား တစ်ခါတစ်ရံသင်ကိုယ်တိုင်အစားအစာကိုစွန့်ပစ်သလား [... ] ပိုပြီး
in အခြားရွေးချယ်စရာနှင့်ထင်မြင်ချက်များ, ဂျာမဏီ, အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် NGO အဖွဲ့
သက်သတ်လွတ်: 1 မှာအာမခံပစ္စည်းအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အတူကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအလွန်အရေးကြီးသည်။ နိုဝင်ဘာလသည်ကမ္ဘာ့သက်သတ်လွတ်နေ့ဖြစ်သည်။ လူအများကလျစ်လျူရှုခြင်းသို့မဟုတ်ဖုံးကွယ်ထားသောအရာသည်သက်သတ်လွတ်စားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာများဖြစ်သည်။ တိရစ္ဆာန်အခွင့်အရေး၊ [... ] ပိုပြီး
ဝိုင်၊ သစ်တော၊ ခုခံနိုင်မှု - ဆောင်း ဦး ရာသီလေ့လာရေးခရီးဖြစ်သော Rhineland Palatinate
Rhineland Palatinate သည်ဂျာမန် Tuscany ဟုလည်းလူသိများသည်။ ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ယဉ်ကျေးမှုကိုနှစ်သက်သူများဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းပြချက်သည်ယခုအချိန်တွင်စပျစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းသာမကဘဲ [... ] ပိုပြီး
သငျသညျမှမေးလ်များကအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ Options ကို!
in ဂျာမဏီ, Tipps
သင်ပျားကိုကယ်တင်နိုင်!5အိမ်သုံးအကြံပေးချက်များ
လွယ်ကူသောစောင့်ရှောက်မှုရှိပြီးခေတ်မီဥယျာဉ်ကိုယနေ့ခေတ်အိမ်များ၏ရှေ့တွင်တွေ့နိုင်သည်။ နားလည်နိုင်သည်မှာမြက်ရိတ်ခြင်းနှင့်ပေါင်းပင်ခြင်းတို့သည်များစွာသောလူတို့၏အကြိုက်ဆုံးအပန်းဖြေမှုတို့တွင်မဟုတ်သော်လည်း [... ] ပိုပြီး
ရှူရှိုက်မိပါ၊ ရှုပါ - Wim Hof ​​နည်းလမ်း
အသက်ရှူခြင်းဖြင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါသလား။ ရောဂါများကိုကာကွယ်နိုင်ပါသလား။ သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်၌မည်သည့်ဆန္ဒရှိသနည်း။ ဤအများနှင့်အခြား [... ] ပိုပြီး
ထန်းဆီ - ထုပ်ပိုးတဲ့နောက်ကျောကိုကြည့်သလား။
ကမ္ဘာတဝှမ်းမိုးသစ်တောများကိုနည်းအမျိုးမျိုးနှင့်အမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ရှင်းလင်းလျက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ပြmanyနာများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် [... ] ပိုပြီး
in ဂျာမဏီ, Tipps, ဗီဒီယိုများ
Poetry Slam - 21 ၏လူကြိုက်များသောအနုပညာ။ ရာစု
Quelle 13 သန်းနီးပါးကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် Julia Engelmann ၏ဗီဒီယိုသည် 2013 နှစ်မှသူ၏ကဗျာဆမ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူဂန္ထဝင်ဖြစ်လာသည်။ သူတို့ရွေ့လျား [... ] ပိုပြီး
Pro နှင့် contra အငြင်းအခုန်များ - ICD-11 တွင်ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုအဖြစ်မီးခိုးထွက်ခြင်း
Burnout သည်ယခုအခါအသုံးများသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်လုပ်ငန်းခွင်၌ဖြစ်သည်။ ဤသည်သည်အထူးသဖြင့်စိတ်ကျဝေဒနာအကြောင်းဖြစ်ပြီး၊ [... ] ပိုပြီး
in ဂျာမဏီ, ဗီဒီယိုများ
ဂျာမနီမှထွက်ခွာခြင်းများ - လျှပ်စစ်မီးနှင့်ရေမရသည့်ဘဝ။ WDR မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်။
နံနက်တိုင်းဖယောင်းတိုင်မီးထွန်းခြင်းနှင့်ကန့်သတ်ထားသည့်စွမ်းအားခွဲခြားခြင်းအားဖြင့်နိုးထရန် - အချို့အတွက်ယင်းသည်နေ့စဉ်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်လူအများစုသည်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရန်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသိကြသည်။ ပိုပြီး
အဆိုပါ Oktoberfest ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်
ဘီယာထု, ဧည့်သည်၏အသားနှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏တန်ချိန်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်သေချာပေါက် Oktoberfest မှာယခင်ကကြဘူး။ သို့သော်ရန်တိုးမြှင့်အသိအမြင်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူ [ ... ] ပိုပြီး
in အခြားရွေးချယ်စရာနှင့်ထင်မြင်ချက်များ, ဂျာမဏီ, ဖြစ်ရပ်များနှင့်ဒီမိုများ
ငါနှစျနှစျကိုရှောင်ရှားသွားပါပြီပြီးနောက်မြူးနစ်အတွက် Oktoberfest ဖို့မလျှောက်ဝံ့ကြ wiedermal ။ သို့တိုင်, ငါ [ ... ] ၌ငါ့ရည်မှန်းချက်အတွေ့အကြုံကိုကြိုးစားနေတာပါ ပိုပြီး
ပလပ်စတစ်အလှကုန် - သင်ပေးဆောင်နိုင်သလဲဆိုတာသိကောင်းစရာများ
ဤသည်မှာ€ 15 များအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းအနံ့ဆွယ်တာအင်္ကျီထိုးပြီးစတိုးဆိုင်များနှင့်အညီကွင်းဆက်အဝတ်တစ်ဦးအနေဖြင့်အကောင်းဆုံး merino သိုးမွှေးအနေဖြင့်လုပ်ပေမယ့်လုံးဝနီးပါးမယ့်ပလပ်စတစ်အိတ်ကနေ [ ... ] မခံခဲ့ရ ပိုပြီး
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဆင့်မြင့် - သိကောင်းစရာ #3
အဘယ်သူသည်အစဉ်အမြဲတည်နေတဲ့စတော်ဘယ်ရီနှင့် vanilla ပလပ်စတစ်ဆရာဝန် Oethker မုန့်ဖုတ်ရောနှောဆံပင်များကဲ့သို့အနံ့အချို့စျေးပေါ Anti-အမဲဆီခေါင်းလျှော်ရည်တွေနဲ့ဆေးကြောရသေး? တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာ [ ... ] ပိုပြီး
in ဂျာမဏီ, Initiatives နှင့်အသနားခံ, အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် NGO အဖွဲ့
၏ Helmut Melzer
in အခြားရွေးချယ်စရာနှင့်ထင်မြင်ချက်များ, ဂျာမဏီ, ဗီဒီယိုများ
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆန့်ကျင် 22 တီထွင်မှု
စက်ဘီး-powered အဝတ်လျှော်စည်အခမဲ့ဆပ်ပြာတက်ထုပ်ပိုး မှစ. source - ပြီးသားတီထွင်ခဲ့ကြကြောင်းအများအပြားဖန်တီးမှုနှင့်ရေရှည်တည်တံ့စိတ်ကူးများရှိပါတယ်။ ဤအတီထွင်မှုအတော်များများဟာ [ ... ] များမှာ ပိုပြီး
အဘယ်သူသည် pancakes ကြိုက်တယ်ဘဲနေရသနည်း သက်သတ်လွတ်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအချို့သောဟင်းလျာများယခုစား၏ဝမ်းမြောက်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အခြားအားဖြင့်တတ်၏။ ဒါက [ ... ] မဟုတ်ပါဘူး ပိုပြီး
in ဂျာမဏီ, ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်စားသုံးမှု, Tipps
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဆင့်မြင့် - သိကောင်းစရာ #2
အခမဲ့ Stores ထုတ်ပိုးများတွင်စျေးဝယ်အခမဲ့စျေးဆိုင်ထုပ်ပိုးနီးပါးသည်ခပ်သိမ်းသောမြို့တို့၌ယခုရှိပါတယ် - သင်ရုံဒီတော့အဘယ်အရာကိုတဦးတည်းအနီးအနားကြိမ် google ရန်ရှိသည် [ ... ] ပိုပြီး
သဘာဝကနေဆိုးဆေး -, La Gomera
သုံးပတ်ကြာအားလပ်ရက်အတွင်းကရီရီယန်ကျွန်းများမှာကျောပိုးအိတ်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဟာစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသူအချို့နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် "hippie ကျွန်း" La Gomera [... ] ပိုပြီး
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဆင့်မြင့် 1 #
သိမှတ်ဖွယ် 1: ငါမှပထမဦးဆုံးဖုန်ထူအပေါ်လူအပေါင်းတို့၏ရှိသည်ဖို့ကိုသုံးခြိုးခြံချွေတာပါစျေးဝယ်မှာခြိုးခြံချွေတာပါစျေးဝယ်, XXL [ ... ] တစ်အောက်အနံ့ကြောင့်အဝတ်ထင် ပိုပြီး
အရင်းအမြစ် "မွတ်စလင်အားလုံးတူညီကြသလား" ဒီမေးခွန်းဟာယူဘီဂျူလီယန်ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်တယ်။ အဓိကအားဖြင့်မူဆလင်ခြောက် ဦး ၏အမြင်များကိုအချင်းချင်းဆွေးနွေးကြသည်။ [... ] ပိုပြီး
ပင်ပန်း, စျေးပေါ, သတ်သတ်လွတ်
ငံပြာရည်နှင့်အတူခေါက်ဆွဲ: ကြွက်ကြွက်ဆူ-phobia နှင့်အတူကျောင်းသားတစ်ဦး၏ဂန္ညစာ, ဒါမှမဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဤကဲ့သို့သောညစဉ်ညတိုင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ပါတယ်။ ဒီလွတ်လပ်ခွင့်ပေမဲ့ [ ... ] ပိုပြီး
စူပါမားကက်ကိုချွတ်ရေးဆွဲနေသည်နှင့်ကမ်းလှမ်းမှုအားဖြင့်ဖျားယောင်းနိုင် - အမဲသားကိုကောင်တာမှာ, သာ 100 ရာခိုင်နှုန်းများအတွက် 70g ကြက်သား [ ... ] ရှိပါတယ် ပိုပြီး
ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးသို့မဟုတ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ - အဆိုပါမျက်မှန်, လုပ်နိုင်သည့်စိတ်ခံစားမှုကိုဖတ်ရှု
3 ရှယ်ယာ1 မှတ်ချက်11 မဲ
ငါမျက်မှန်တရံရှိကွောငျးကွားသောအခါကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအတွေး, အစိတ်ခံစားမှုခဲ့အသိအမှတ်ပြုရန်: ငါတို့သည်ကွောအတွေး-ကိုင်တွယ်အနာဂတ်မှာရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ အဲဒီနောကျ [ ... ] ပစ်ချ ပိုပြီး
in ဂျာမဏီ, ဖြစ်ရပ်များနှင့်ဒီမိုများ
မြူးနစ် - ထိုပိုစတာနောက်ကွယ်မှလူ
အဆိုပါပိုစတာနောက်ကွယ်ကလူတွေကိုအဘယ်သူနည်း အဘယ်သူသည်တောင်သူတွေအတွက်အရှိဆုံးပုံမှန်မဟုတ်သောပိုစတာများရှိသနည်း သငျသညျနောက်ပိုင်းတွင်မှတ်မိနိုင်သည့်ရန်ထုတ်ပြန်ချက်များ? ပင်လယ် Next ကို [ ... ] ပိုပြီး
ဒါဟာနံနက်ယံ၌ကော်ဖီအဖြစ်ပုံမှန်ကဲ့သို့ဖြစ်၏: ငါတို့သည်မဝယ်ထွက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်ကြော်ငြာခြင်း။ ဒါဟာ [ ... ] လူတွေကယခုကြောင်းကြော်ငြာခြင်းကိုသိသောလည်းဘုံဖြစ်ပါသည် ပိုပြီး
in အခြားရွေးချယ်စရာနှင့်ထင်မြင်ချက်များ, ဂျာမဏီ, ခရီးသွားသိကောင်းစရာများ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးပတ်ငါတို့သည်ဘာမျှမစီစဉ်ထားခဲ့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌အနေရီကျွန်းစုများတွင် (ရှင်သန်မှု) အားလပ်ရက် - အဘယ်သူမျှမနေရာထိုင်ခင်း, အဘယ်သူမျှအပန်းဖြေအစက်အပြောက်မျှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။ ကျနော်တို့ [ ... ] ပျံသန်း ပိုပြီး
အနာဂတ်များအတွက်သောကြာနေ့ - Motivation vs. demotivation
တချို့ကအချိန်လွန်ခဲ့တဲ့ငါနောက်ဆုံးတော့ Regensburg အတွက် "သောကြာနေ့အနာဂတ်အတွက်" သရုပ်ပြဖို့ကပြုမိ။ ငါ့အဘို့တစ်ဦးကTräumchenပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသည် [ ... ] ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပိုပြီး
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း: 20.9 အပေါ်ရာသီဥတုကာကွယ်မှုများအတွက်ဆန္ဒပြပွဲများနှင့်သပိတ်။
သောကြာနေ့, 20 လာမယ့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်သပိတ်။ စက်တင်ဘာလ, ထောင်ပေါင်းများစွာပိုပြီးရာသီဥတုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (သို့မဟုတ်လျော့နည်းပကျြစီးခွငျး) ကိုသက်ဆိုင်ရာရက်စွဲများနှင့်မှလင့်များအတူပို့လိုက်ကြတယ်၏ .A ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် [ ... ] ပိုပြီး
in ဂျာမဏီ, ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်စားသုံးမှု, ဗီဒီယိုများ
အစိမ်းရောင်ခလုတ်ကို: သစ်ကို Eco-တံဆိပ်ကဘာလဲသနည်း
5 ရှယ်ယာ2 မှတ်ချက်များ11 မဲ
၏ Karin Bornett
14 နှစ်ကြာပြီးနောက်: Silvie Kreibiehl ကူး Klaus နို့ဂျာမန်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့သမ္မတ
[ ... ] Klaus နို့ presides အဖွဲ့အစည်းများ၏ပဲ့မှာ 14 နှစ်ကြာပြီးနောက်: ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့အစည်းမှာဂျာမန်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့သစ်တစ်ခုဇာတ်စင်စတင်နေပြီယနေ့ပြောသည် ပိုပြီး
in အခြားရွေးချယ်စရာနှင့်ထင်မြင်ချက်များ, ဂျာမဏီ, ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်စားသုံးမှု, ဗီဒီယိုများ
Rita Apel - မက်စ်နှင့် Moritz
in အခြားရွေးချယ်စရာနှင့်ထင်မြင်ချက်များ, ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်စားသုံးမှု, Tipps
ပိုက်ဆံချွေတာနေချိန်တွင်သင့်ရဲ့ Eco footprint ကိုတိုးတက်လာဖို့လိုပါသလား? ထို့ပြင်များစွာသောဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ သငျသညျကို fix နိုင်ပါတယ်ဟောငျးသောအရာတို့ကိုအသစ်ဂျာမန် "upcycle" ။ များစွာသောမြို့, အဲဒီမှာ [ ... ] ပိုပြီး
"တိုင်းကားတစ်စီးသည်ထရပ်ကား Neutrinovoltaic ဆဲလ်တွေတပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်တစ်နေ့မှာဓါတ်ရောင်ခြည်မဆိုအမျိုးအစားကနေသူတို့ရဲ့စွမ်းအင်ကိုဆွဲပါ။ တိုးမြှင့်စွမ်းအင်ဝယ်လိုအားများအတွက် [ ... ] ပိုပြီး
in ဗီဒီယိုများ, အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် NGO အဖွဲ့
အိုငျပီစီစီအစီရင်ခံစာအပေါ် comments | #nachgefragt | WWF ကဂျာမဏီ
နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များ - ငါတို့သည်ဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအဘယ်သူသည်
Eren Keskin cowed မဟုတ်ပါ
ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်းရပ်တန့်: ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမွေအနှစ် - ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်
in ကမ္တာ့, အဲန်ဂျီအိုများ၏သတင်းများ, ဗီဒီယိုများ, အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် NGO အဖွဲ့
in အခြားရွေးချယ်စရာနှင့်ထင်မြင်ချက်များ, ကမ္တာ့, ဗီဒီယိုများ
in အခြားရွေးချယ်စရာနှင့်ထင်မြင်ချက်များ, Initiatives နှင့်အသနားခံ, ဗီဒီယိုများ
RWE Hambach သစ်တောနှင့်ကျေးရွာများခြိမ်းခြောက်အဖြစ်
အိုငျပီစီစီသင့်အကြောင်းကိုသင်သိ5အမှုအရာ
in ဖြစ်ရပ်များနှင့်ဒီမိုများ, ဗီဒီယိုများ
14.05.19 အပေါ်ဘာလင်တွင် "ဥရောပ, နိုး," လှုပ်ရှားမှုလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်လူငယ်